CRPH (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ) ၏ Legitimacy တရားဝင်မှုဖြစ်ခြင်း - Yangon Nation News
CRPH (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ) ၏ Legitimacy တရားဝင်မှုဖြစ်ခြင်း
CRPH(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ) ၏ Legitimacy တရားဝင်မှုဖြစ်ခြင်း၊
ယနေ့(၆.၃.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင်(၅.၃.၂၀၂၁) ရက်စွဲဖြင့် အပိုဒ်(၃) ချက်ကို နိုင်ငံတော်အာဏာကို တရားလက်လွတ် လက်နက်အားကိုးအကြမ်းဖက်လုယူထားသော ၊
ပြည်သူအများ၏ သဘောတူညီမူ ဆန္ဒမရရှိပါဘဲ၊
သူတို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဟုအမည်ပေးသတ်မှတ်ထားသော စစ်အုပ်စုမှ
နိုင်ငံတော်မှပိုင်ဆိုင်သည့် သတင်းစာများ၌ ထည့်သွင်းကြေညာ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်၊
အပိုဒ်(၁) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပြည်သူ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများနှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများအရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရားဝင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးသူများက “ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ” အမည်ဖြင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကြီးလေးသည့်ရာဇဝတ်မူကိုကျူးလွန်ရာရောက်သဖြင့် ….
ပုဒ်မ(၃၈)(က)နဲ့အညီ၊ မိမိတို့ပြည်သူပြည်သားများမှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဆန္ဒမဲပေးရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၄) နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌ တည်သည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း(၉)၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အခန်း(၉) နှင့်အညီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
အခန်း(၁၀) ပုဒ်မ(၄၉)(က)(ခ) ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပုဂ္ဂို၏အမည်ကိုလည်းကြေညာပြီးဖြစ်ပါသည်၊
ပုဒ်မ(၇၂)(ခ) ကော်မရှင်သည် နည်းဥပဒေခွဲ(က) နှင့်အညီ ပေးပို့တင်ပြလာသည့်ကြေညာချက်များအရ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလည်းကောင်း၊
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အခန်း(၈) ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အမည်စာရင်းပေးပို့လာသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလည်းကောင်း၊
” အသိအမှတ်ပြုလွှာများ ” ထုတ်ပေးရမည်၊
ယင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းကိုနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာရမည်၊
ဤဥပဒေပါပြဌာန်းချက်ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ကော်မရှင်မှ လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါသည်၊
သို့ပါသောကြောင့် မိမိတို့ပြည်သူများမှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်သည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်ညီပါသည်၊
ဒီမိုကရေစီနည်းကျပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော်အာဏာအား လုယူခြင်း၊
ပြည်သူ့ရွေးချယ်မူ ” Mandate ” ရရှိထားသည့် ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကျင်းပမည့် လွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍ မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊
၎င်းလုပ်ရပ်များသည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊လုပ်ထုံးများနှင့်လည်းညီညွတ်မူ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပေ၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်၊ ပုဒ်မ(၁၂၄) (က) (ခ) အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်ပြီးနောက်ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်၏ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါသည်၊
ပုဒ်မ(၁၂၃) ပြဌာန်းချက်ပါဖွင့်ဆိုချက်အရ လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းတစ်ရပ်စတင်သော ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀) အတွင်းကျင်းပရမည်၊
ဟုပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ဖျက်လို ဖျက်စီး လုပ်သည့် တပ်မတော်စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုမှ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား အသုံးချ အမိန့်ပေးခိုင်းစေမူကသာလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိပါပေ၊
ထိုကဲ့သို့သော တပ်မတော်စစ်ခေါင်းဆောင်တို့၏ ဥပဒေနှင့်မညီသည့် မတရားပြုကျင့်မူများရှိနေသော အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေကြရရင်း၊
(၄.၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၈၈) အကြာတွင် နေပြည်တော်စည်ပင်ဝင်းအတွင်းမှာပင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကတိသစ္စာပြုလွှာများတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးက လွတ်တော်ခေါ်ယူကြောင်းကြေညာခဲ့ရပါတယ်၊
အချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ကတိသစ္စာပြုလက်မှတ်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိခဲ့ပါသည်၊
စစ်အုပ်စု၏ တရားဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်နေမူကြောင့် ထိုကဲ့သို့ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေပေါင်း၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် (၆၄၂) ဦးတွင် (၃၈၇) ဦးကျော်မှ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို အွန်လိုင်းမှလက်မှတ်ထိုးတက်ရာက်ခဲ့ပါသည်၊
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ဦးရေ ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး အထမြောက်အောင်မြင်ပါသည်၊
ဤပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးမှ သဘောတူ ထောက်ခံ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၅) ဦးပါဝင်သော ၊
” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ” “(CRPH )” သည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးအရ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ(၄) အရ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌တည်သည်၊
ဟူသော တရားဝင်ဖွင့်ဆိုချက်အရ နိုင်ငံသား ပြည်သူများမှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဆန္ဒမဲပေး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် ပြည်သူ့ ” Mandate” ရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထက်ဝက်ကျော်၊သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှ အဆိုပြု သဘောတူ ထောက်ခံဖွဲ့စည်း ထားသည့် ” ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ” ” CRPH ” သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်၊
ယခုအချိန်တွင် မိမိတို့ပြည်သူများမှ လက်ခံမူမရှိသော၊
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြည်သူများမှ ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသော အစိုးရဆီမှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်နက်အသုံးပြု လုယူထားသော၊
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အပါဝင် မည်သည့်နိုင်ငံကမှ အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမူမရှိသော၊
စစ်ကောင်စီတစ်ဖြစ်လဲ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဟုကိုယ့်ကိုကိုယ် အမည်နာမတပ်ထားသော အဖွဲ့သည်သာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထုံးများနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်မူ အလျဉ်းမရှိပါပေ၊
ဟုပြည်သူ ပြည်သားများမှ သိသာ မြင်သာကြစေရင်းအတွက် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်၊
” CRPH ” ကိုထောက်ခံရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး၊
စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး၊
ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရသူ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ ချက်ချင်းဖျက် ချက်ချင်းဖျက် ၊
………. (၆.၃.၂၀၂၁) ……….
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ က မြန်မာ့ Social Punishment
အာဏာရူးတို့ တရုတ် နောက်ကျော ဓါးနှင့် ထိုးလေပြီ